ကောလာဟလသတင်းများအရ LEGO 10276 Colosseum သည်အခမဲ့အပိုဆုကြေးရရှိနိုင်သည်
11 / 11 / 2020 11 / 11 / 2020 ဂရေဟမ် 611 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၆ Colosseum, 18 +, 2020, D2C, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, Lego, ကောလာဟလာ
၀ ယ်မယ့်လက်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် Lego ၁၀၂၇၆ Colosseum အသစ်တစ်ခုကိုကောလာဟလအရသိရသည်ထားကြ၏။
Lego ပန်ကာဝက်ဘ်ဆိုက် အဆိုပါအုတ်ဝါသနာရှင် အသစ်တစ်ခုကိုကောလာဟလရှိပါတယ် ၁၀၂၇၆ Colosseum - အစုံပထမ ဦး ဆုံးသြဂုတ်လအတွင်းကောလဟာလများ နှင့် ထို့နောက်မကြာသေးမီကအားဖြင့် teased LEGO Group။ ဤအချက်အလက်အသစ်အရပရိသတ်များသည်မော်ကွန်းအသစ်ဖြန့်ချိမှုကိုအမှာစာပေးသောအခါ ၀ ယ်ယူရန်အတွက်အခမဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တရားဝင်ကြေငြာချက်ကိုနို ၀ င်ဘာ ၁၃ ရက်ညနေ ၃း၀၀ နာရီတွင်ထင်ကြေးပေးပြီးနိူင်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်များကဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိနိုင်မှာဖြစ်သည် Lego အုပ်စုတွင်စတိုးဆိုင်ရှိသည်။
ထိုအဆိုအရ အစောပိုင်းကောလာဟလများ, ၁၀၂၇၆ Colosseum 9,035 အပိုင်းပိုင်းမှာလာလိမ့်မယ်။ ဒါကကျိန်းသေကအကြီးဆုံးစေလိမ့်မယ် Lego , လက်ရှိရှေ့တန်းမှေးမှိန်, ယနေ့အထိထားကြ၏ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon.
အဆိုပါမော်ဒယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုင်ကြလိမ့်မယ် Creator Expert ခေါင်းစဉ်။ သို့သော် Lego Group သည်ဒီတံဆိပ်ကိုဒီနှစ်အငြိမ်းစားယူပြီး 18+ တံဆိပ်ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ အကယ်၍ ကောလာဟလကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်လာလျှင်၎င်းသည်ထွက်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ဟုယူဆခြင်းသည်ဘေးကင်းနိုင်သည် Lego အီတလီ အကြံပြု, ဒါကြောင့်အသစ်သော 18+ သတ်မှတ်ရေးသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကပထမ ဦး ဆုံးလှောင်ပြောင်ဖြစ်နိုင်သည် Lego Group မှထွက်ထားပါတယ်။ သင် Colosseum ကိုလည်းသေတ္တာထဲတွင်တွေ့နိုင်သည် art ဘို့ ၁၉၆၉ Fiat 10271.
တရား ၀ င်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းမတိုင်မီကောလဟာလများကိုဆားတစ်ခွက်နှင့်ယူသင့်သည် Lego Group မှ။
← Lego Star Wars Tatooine အပေါ် 75299 တှေ့ဆုံကောလဟာလများ
LEGOLAND ကိုရီးယားသည် 'စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံ' ဖြစ်လိမ့်မည် →
ဂရေဟမ်သည် ၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလအထိ BrickFanatics.com အယ်ဒီတာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၌ LEGO နှင့်သက်ဆိုင်သောစီမံကိန်းများတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ သူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသော ၀ ါသနာများ၊ တွစ်တာ @ ဂရေဟမ်မှဂရေဟမ်နောက်လိုက်ပါ။